जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृतमाथि छुरा प्रहार - Prawas Khabar
जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृतमाथि छुरा प्रहार
७ भदौ, रामेछाप । जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका कार्यक्रम अधिकृत नारायण सुवेदीमाथि छुरा प्रहार भएको छ । गएराति आफ्नै निवासमा सुतिरहेको बेला उनी माथि छुरा प्रहार भएको हो ।
मन्थली नगरपालिका १ मच्छेडाँडीमा रहेको सुवेदीको निवासमा राति ९ बजेतिर मुखमा मास्क लगाएर पसेको अज्ञात व्यक्तिले छुरा प्रहार गरेको थियो । परिवारका सदस्यहरु घरका अन्य कोठामा रहेको बेलामा सो घटना भएको हो ।
उनलाई तत्कालै उद्धार गरी तामाकोशी सहकारी अस्पतालमा ल्याइएकोमा त्यहाँ प्राथमिक उपचारपछि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको थियो । धुलिखेल अस्पतालमा राति नै उनको शल्यक्रिया भएको छ । अस्पतालले सुवेदीको आन्द्रा काटिएको जनाएको छ ।
ओछ्यानमा ढल्किएर फेसबुक चलाइरहेको बेला मुखमा माक्स लगाएर आएको व्यक्तिले छुरा रोपेको सुवेदीले बताएका छन् । माथिल्लो तलामा रहेका सुवेदीलाई छुरा प्रहार गर्ने व्यक्ति बरन्डाबाट हाम फालेर भागेको परिवारका सदस्यहरु बताउँछन् ।
छुरा घटनास्थलमा नै फेला परेको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
कांग्रेसलाई प्रचण्डको प्रश्नः लासको राजनीति गर्न चाहेको हो ?
प्रदेशीको आँसु र पसिनाको श्राप लाग्छ सरकार ! (दुई मिनेट दिएर अवश्य पढ्नुहोला) सक्दो सेयर गरौं
धर्मनाथ पासवानलाई सहयोग प्रदान ।
संघियताको विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको टड्कारो आवश्यकता;-राना
चिनियाँ प्रविधिको मकै नेपालमा